Google Play Store मा Android अनुप्रयोग प्रकाशित गर्न प्रभावकारी तरिकाहरू Martech Zone
एन्ड्रोइड अनुप्रयोग वितरण गर्नको लागि सरल विधि Google प्ले स्टोरको माध्यमबाट हो। यो एक महान धेरै संभावित ग्राहकहरु सम्म पुग्न कम से कम जटिल दृष्टिकोण हो। Play Store मा पहिलो अनुप्रयोग स्थानान्तरण गर्न धेरै यति कष्टकर छैन, केवल केही सुझावहरू डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोडको लागि तयार गरिएको तपाईंको अनुप्रयोग।
एन्ड्रोइड अनुप्रयोग विकासकर्ताहरूले तपाईंलाई उत्तम अनुप्रयोग प्रदान गर्न प्रयास गर्दछ जुन अधिकतम दर्शकहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। तपाईंले अनुप्रयोग बनाउनमा ठूलो समय खर्च गर्नुभयो, सबै सम्भावित चीजहरू पूरा गर्नुभयो र तपाईंको अनुप्रयोगमा १००% प्रस्ताव गर्नुभयो। वर्तमान मा, यो एक आदर्श अवसर छ तपाइँको अनुप्रयोग संसारमा पठाउन। १ अरब भन्दा बढी Android गतिशील ग्राहकहरू विश्वभर जताततै उपलब्ध छन्। यो एक चरणले तपाईंलाई तपाईंको रुचि समूहलाई सम्पर्क गर्न नजीक लिनेछ।
प्ले स्टोरमा लगभग २.2.47 मिलियन अनुप्रयोगहरू पहुँचयोग्य छन् र around 3739 XNUMX XNUMX अनुप्रयोगहरू हरेक दिन सुरू हुन्छन्।
तथ्या ,्क, अनुप्रयोग स्टोर २०१२ मा अनुप्रयोगहरूको संख्या
मोबाइल अनुप्रयोगहरूको क्षेत्रबाट गुगल प्ले स्टोरको महत्व र सर्वव्यापीतालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। यदि तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ - गुगल प्ले स्टोरमा कसरी अनुप्रयोग प्रस्तुत गर्ने, त्यस बिन्दुमा तपाईंको खोजी यहाँ समाप्त हुन्छ। त्यहाँ एउटा विचार छ कि तपाईले यसलाई चलाउनु पर्छ प्रभावी ढ application्गले गुगल प्ले स्टोरमा अनुप्रयोग स्थानान्तरण गर्नका लागि। यी लाइनहरूमा हामी कसरी सुरू हुन्छौं।
तपाईको अनुप्रयोगको मूल्याsess्कन गर्नुहोस् - सर्वप्रथम, तपाईंले आफ्नो अनुप्रयोगलाई उस्तै संख्याहरूको परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि तपाईंले गर्न सक्नुहुनेछ र १०० प्रतिशत पक्का हुनुहोस् कि यसले राम्रो प्रदर्शन गर्नेछ, प्ले स्टोरमा स्थानान्तरण आवेदन अघि। तपाईं सामान्यतया यस कारणका लागि इमुलेटरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड्रोइड-नियन्त्रित ग्याजेटको प्रयोगले परीक्षण प्रक्रियालाई बृद्धि गर्दछ। यसले तपाईंको अनुप्रयोगलाई वास्तविक ग्याजेटमा प्रयोग गर्ने अनुभव दिनेछ र कुनै पनि बगहरू भत्काउन तपाईंलाई सशक्त बनाउँदछ।
अनुप्रयोगको संक्षिप्त आकार - जब तपाई अनुप्रयोग बनाउँदै हुनुहुन्छ बिन्दुमा, अनुप्रयोगको आकार घटाउने प्रयास गर्नुहोस्। कुनै पनि अनुप्रयोगको वास्तविक आकारले फरक पार्छ। ग्राहकहरूले एक एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न आवश्यक महसुस गर्दैनन् जुन उनीहरूको मेकानिकल एसेम्ब्ली स्टक स्टिलिंगमा विशाल ठाउँ ओगटेको छ। वास्तवमा Google ले मात्र अनुप्रयोग आकार 50०MB सम्मको लागि अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंको अनुप्रयोग भारी छ भने, तपाईंलाई एपीके विकास रिपोर्टहरूले यसको भागमा विभाजन गर्न आवश्यक पर्दछ त्यसैले यसलाई स्थानान्तरण हुन सक्छ। तपाईलाई गुगल प्ले कन्सोलमा चिनो लगाउन र एक प्ले वितरक हुनु पर्छ। यस तथ्यको बाबजुद कि तपाईको अनुप्रयोगले यस बन्दी को बिन्दु पार गर्दछ, त्यस बिन्दुमा तपाईले एन्ड्रोइड एपीके को विस्तार रेकर्ड को उपयोग गर्नु पर्छ, प्रभावी ढ your्गले तपाईको अनुप्रयोग पठाउन। यसले तपाईको अनुप्रयोगलाई सेगमेन्ट्समा अलग्गिने छ र प्रत्येक २ मेगाउन सम्म तपाईको अनुप्रयोगलाई थप GB जीबी ठाउँ दिनेछ। अतिरिक्त जानकारी गुगल क्लाउडमा राखिएको छ र जुनसुकै समयमा पुन: प्राप्ति हुन्छ जुन अनुप्रयोग प्रस्तुत गरियो।
अनुप्रयोग इजाजत पत्र प्राप्त गर्नुहोस् - यसले तपाईलाई तपाईका अनुप्रयोगलाई आधिकारिक बनाउँन कुनै चोट पुर्याउँदैन जब सम्म तपाई आफ्नो अनुप्रयोग गुगल प्ले स्टोरमा हस्तान्तरण गर्नुहुन्न।
बन्डल आईडी र संस्करण नम्बरको साथ एपीके रेकर्डमा ध्यान दिनुहोस् - तपाईंले एक APK रिपोर्ट सेट अप गर्न आवश्यक छ जसमा तपाईं आफ्नो अनुप्रयोगको लागि एक संस्करण नम्बर बाँडफाँड गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई पछि तपाईंको अनुप्रयोगमा अर्को रिपोर्ट स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पर्दछ पछि मद्दत गर्दछ। प्याक आईडी पनि अनुप्रयोग आईडी भनिन्छ र एक प्रकारको एक अनुप्रयोग बनाउनका लागि प्रयोग गरीन्छ, यो महत्त्वपूर्ण अंश हो जब तपाईं आफ्नो अनुप्रयोग प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यो एन्ड्रोइड .5.0.० वा अधिक को लागी अनुप्रयोगको सम्पूर्णतामा लागू हुन सक्छ।
सबै सुरक्षा प्रमाणपत्रको साथ अनुप्रयोगमा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ - यो एक APK को रूपमा चिन्ह लगाइएको राम्रो टेस्टामेन्ट हो जुन तपाईंलाई प्रत्येक पटक Play Store मा अनुप्रयोग वितरण गर्न आवश्यक हुन्छ। यसलाई अन्यथा JSK कागजात भनिन्छ प्रमाणिकरणहरू सहित, उदाहरण को लागि, कीस्टोर गोप्य वाक्यांश।
तपाईंको अनुप्रयोग स्टोर सूची बनाउनुहोस् - अनुप्रयोग पोष्टिंग एक मजबूत घटक हो कि डाउनलोड छनौट को लागी तपाइँको आवेदन सहयोग गर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिले आवेदन पोष्टिंगमा उनीहरूको समय दिदैन तर ब्यक्तिगत मौकामा कि तपाइँ एन्ड्रोइड अनुप्रयोग पास हुनु अघि यो गर्नुहुनेछ, तपाइँले केहि आश्चर्यजनक परिणामहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तपाईंले ग्राहकहरूलाई केही डाटा दिन आवश्यक छ कि यो कस्तो प्रकारको उपयोगिता हो र यसको विशेषताहरू के हुन्।
Google Play मा Android अनुप्रयोग प्रकाशित गर्न चरणहरू
गुगल प्लेमा एन्ड्रोइड अनुप्रयोग पठाउनु भन्दा पहिले, सबै कुरा तयार छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। तपाइँलाई तपाइँको अनुप्रयोगको केहि स्क्रिन क्याप्चरहरू आवश्यक पर्दछ (उच्च क्यालिबरमा), अनुप्रयोगको फ्रेमवर्क र, स्पष्ट रूपमा, एक APK कागजात (अनुप्रयोग आफैं)। त्यहाँ एक आवेदन को आकार को बारे मा कडा प्रतिबन्धहरु छन्। सब भन्दा चरम आकार १०० Mbytes हो। यसलाई प्राथमिकता दिइनेछ यदि यो केवल M० Mbytes भन्दा बढी छ भने, त्यस्तो अवस्थामा जो डरलाग्दो नेटवर्कसँग जोनहरूमा बस्ने ग्राहकहरू तपाईंको अनुप्रयोग प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। गुगल प्लेमा एन्ड्रोइड अनुप्रयोग वितरण गर्न यहाँ साधनहरू छन्:
एक डिजाइनर खाता बनाउनुहोस् - गुगल प्ले कन्सोल खोल्नुहोस् र एक ईन्जिनियर खाता बनाउनुहोस्। एन्ड्रोइड अनुप्रयोग वितरण गर्न यसको कति खर्च हुन्छ? गतिविधि $ 25 लागत। तपाईंले भर्खर एक पटक भुक्तान गर्नुभयो, रेकर्डले तपाईंलाई उही संख्याको अनुप्रयोगहरू वितरण गर्न विशेषाधिकार दिन्छ जुन तपाईंलाई र जब कुनै पनि स्थानमा चाहिन्छ।
तपाइँको अनुप्रयोगको शीर्षक र चित्रण टाइप गर्नुहोस् - वितरण गर्नु अघि यसलाई विचार गर्नु स्मार्ट हो। जब तपाइँ अन्वेषण गर्नुहुन्छ तपाइँको अनुप्रयोग चित्रणमा तिनीहरूलाई थप्नको लागि हेर्ने शब्दहरूको खोजी गर्नुहोस्। पहिलो कुरा जुन प्रयोगकर्ताले याद गरे त्यो अनुप्रयोगको नाम हो, केहि आकर्षक कुनै पनि प्रयोगकर्ताको ध्यान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ! फोकस रमाईलो र वर्णनात्मक नाममा हुनुपर्छ।
स्क्रीन क्याप्चर समावेश गर्नुहोस् - यो सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि स्क्रिनशट उच्च गुणवत्ताको हो। निश्चित गर्नुहोस् कि चित्रहरूले केही असाधारण हाइलाइटहरू देखाउँदछ जुन तपाईंको अनुप्रयोगमा छन् वा अनुप्रयोगको प्राथमिक विचार हो।
तपाईंको अनुप्रयोगको सामग्री रेटिंग निर्धारण गर्नुहोस् - वर्तमानमा तपाईले आफ्नो वस्तुको पदार्थ रेटिंग निर्धारण गर्न केहि सोधपुछको लागि जवाफ दिनुपर्नेछ। यो बच्चाहरूलाई तपाइँको अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नबाट रोक्ने अवसरको अफमा अफ्नो सीमित राखिएको छ कि यसले कुनै पनि ठूलो सामग्री समावेश गर्दछ। तपाईले उत्तम उत्तर दिनुहुन्छ अन्यथा तपाईलाई गुगल प्लेमा एन्ड्रोइड अनुप्रयोगको डिस्चार्जबाट वंचित गरिने छ।
अनुप्रयोग वर्गीकरण चयन गर्नुहोस् - यो पनि त्यस्तै महत्वपूर्ण छ कि यो डाउनलोड मा तपाइँको समस्याहरु लाई उठाउछ। बन्द अवसरमा जुन तपाईं अनुपयुक्त वर्गीकरण छान्नुहुन्छ, व्यक्तिसँग यसलाई कक्षामा हेर्ने विकल्प हुँदैन यो हुनुपर्दछ!
सुरक्षा दृष्टिकोण मुद्दाहरू नियन्त्रण गर्नुहोस् - यदि एप्लिकेसनले कुनै पनि निजी ग्राहकहरूको जानकारीको प्रयोग प्रयोग गर्दछ यदि तपाईंले यसलाई प्रदर्शन गर्न आवश्यक हुन्छ र सुरक्षा दृष्टिकोण समावेश गर्दछ जहाँ तपाईं आफ्नो सम्भावित लाभको लागि यस जानकारीको उपयोग नगर्ने निश्चित गर्नुहुन्छ। सुरक्षा रणनीतिमा तपाइँले ग्राहकहरूलाई कुन जानकारी जम्मा गरिनेछ भनेर खुलासा गर्नुपर्दछ, कसरी यो डेटा ह्यान्डल गरिने छ र कसले यसको पहुँच गर्ने छ।
संसारको population२ प्रतिशत जनसंख्याले सोशल मिडिया प्रयोग गर्दछ भन्ने तथ्य यो विज्ञापनको उत्तम प्लेटफर्म हुनका लागि पर्याप्त कारण हो।
यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि प्रभावी ढ Play्गले प्ले स्टोरमा एप्लिकेसनलाई स्थानान्तरण गरेपछि तपाईं आफ्नो झोलाहरूमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गतिविधिहरूको एक ठूलो सम्झौता हो कि अगाडि बढ्न प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ! प्रकाशन पछि तपाईंको अनुप्रयोगको जीवन मात्र तपाईं (वा समूह जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ) मा निर्भर गर्दछ। धेरै जसो समय, सुरूवात पछि समर्थन अनुप्रयोगको पहुँच र यो उपयोगी छ कसरी प्रयोगकर्ताहरू लाई पहिचान गर्दछ।
सबै भन्दा राम्रो ह्याक तपाईंको ग्राहकहरु मा ट्यून मा छ। गतिशील ग्राहकहरू सबै भन्दा राम्रो मार्गनिर्देशनहरू हुन्। तिनीहरू वास्तविक प्रयोगकर्ताहरूबाट अन्तरदृष्टि फीडब्याक साझा गर्न सक्छन् जुन तदनुसार सुधार गर्न सकिन्छ। घटनामा जब तपाईं ग्राहकहरूको आलोचनालाई बहुमूल्य डाटाको एक राम्रो स्रोतको रूपमा उपयोग गर्नुहुन्छ तपाईंले आय बढावा दिन र अतिरिक्त मुख्यधारा बनाउन सबै अवसरहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ
तपाईंको आफ्नै मोबाइल अनुप्रयोग विकास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई जडान गर्नुहोस्, Sysbunny एक मांग गरिएको मोबाइल अनुप्रयोग विकास कम्पनी हो जसले सुन्दर डिजाइन, र द्रुत उत्तरदायी मोबाइल अनुप्रयोग विकासको विकास गर्‍यो।
टैग: google play storeमोबाइल अनुप्रयोगअनुप्रयोग प्रकाशित गर्नुहोस्मोबाइल अनुप्रयोग प्रकाशित गर्नुहोस्sysbunny
स्थान: लेनदेन क्षमताको साथ डिजिटल रूपान्तरण बिक्री बल